Panama: Firenena Amidy · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Georgi McCarthy
Voadika ny 20 Jona 2012 9:18 GMT
Amidy i Panama : na farafaharatsiny izay no fahitan'ny vondrona Panameana lehibe iray ny zava-misy taorian'ny nahitàny tamin-katezerana ny fomba ataon'ny governemantan'ny Filoha Ricardo Martinelli ikendrena ny handafosana ampahany goavana amin'ireo fananan'ny firenena.
Milaza amintsika ny fomba fijeriny i Erick Simpson ao amin'ny bilaoginy Pma507Pty Panamá Blog:
Tonga tamin'ny haavo ambony tokoa ny hatezerana satria na dia ireo antoko roa mpifandrirotra hatrizay teo amin'ny tantara aza dia niara-nanangana “mandatehezana ho an'ny demaokrasia” niraisany. Ny Antoko Revolisionera Demaokratika [en] (PRD), natsangan'ny Jeneraly Omar Torrijos [en], dia nanangana vovonana iray niarahany tamin'ny Antoko Panameñista [en], natsangan'i Arnulfo Arias Madrid [en], izay efa filohan'i Panama mandra-pisian'ny fanonganam-panjakana notarihan'i Torrijos sy ny Tafi-Bahoaka Panameana. Na izany aza, tamin'ny faran'ny herinandro dia niara-“nifoka ny pipan'ny fandriampahalemana” ireo antoko roa ireo ary nifanaiky ny hijoro hanohitra ny fikasan'ny governemanta amin'izao fotoana.
Ny Panameana sasany dia nifamory tamin'ny Alatsinainy 19 Jona 2012, teo anoloan'ny Antenimiera mpanao lalàna, toerana tokony niresahan'ireo mpahay lalàna ny mikasika ny famelàna na tsia ny hivarotana an'ireo anjaran'ny fanjakana ireo. Ny mpanotrona rehetra sy ireo mpanao politika avy amin'ny mpanohitra dia azo lazaina ho nibodo avokoa io fotoam-pivoriana io, izay tsy maintsy nofoanana sy nahemotra ho ny 19 Jona. La Prensa mitatitra hoe :
Ireo Panameana mpiondana aterineto koa dia naneho ny hatezeran-dry zareo ary noforonina ny tenifototra No Vendan Panamá (“Aza Amidy i Panama”), ka tamin'izany no nanehoan'ireo Panameana an-jatony ny tsy hafaliany amin'ny fomba fitantanana ny fananam-panjakana.
Olana lalim-paka no hitan'i Ana Lorrein J (@analorrainej) izay lasa lavitra noho ny resaka kilasy politika ary miantraika hatrany amin'ny fototry ny fiarahamonina Panameana mihitsy :
Mangataka ny filoham-pirenena i Karen Chalmers (@karen_chalmers) mba hisoroka ny fifandonana eo amin'ny samy Panameana :
Nifarana taminà diabe iny andro iny, niaraka taminà Panameana an'aliny nangataka ny governemanta hampiato ilay famarotana. La Prensa no mamintina azy :